Farmaajo oo degdeg Dalka dib ugu soo laabtay Kadib safarkiisi Cumaan. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Farmaajo oo degdeg Dalka dib ugu soo laabtay Kadib safarkiisi Cumaan.
Previous articleDegdeg:- Musharax xil ka raba Galmudug oo iska casilay xilkii uu ka hayay xukuumadda Khayre.
Next articleShirkadda DP-World oo ka guuleysatay Dowladda Jabuuti.
Taajka Maakhir January 14, 2020 At 10:37 pm
Madaxweyne Farmaajo fariidnimo dheeri ah ayuu ku muujiyay kaalintan uu galay, sababo badan daraadood. Marka aan ahamiyadda booqashadiisan wax yar ka bidhaamiyo Soomaaliya iyo Cummaan dabcan taariikh aad u qoto dheer baa ka dhexeysa, in kasta oo ay taariikhdaasu khaas u tahay soomaalida geyiga Woqooyi Bari oo Saldanadda Cummaan heer Saldaneed cilaaqad dheer la lahaa. Waxaa cilaaqaasi ka mid ah dhalasho iyo is dhexgal baahsan.
Waxaa xusid mudan saameynta ay Saldanadihii Islaamiga ahaa ku lahaayeen gaar ahaan geyiyada ay qowmiyadda Soomaalida oogu fac weyn degto oo uu deegaanka uu Madaxweyne Farmaajo ka soo jeedo ka mid yahay. Taariikhdaas dahabiga ayaa laga dhex dheehan karaa halka ay Beesha Mareexaan naaneysteeda “mareexaan” salka ku hayso oo ahaa marinkii ay ganacsatada Carbeed u mari jireen inta u dhexeysa xeebaha Bari iyo Mudug iyo Kililka Shanaad. Waxaa na weeye in ay ugu magac dareen “Marru-Reyxaan” mise “marinka udgoon” ama jidka dhulkii udgoonaa.
Booqashada Farmaajo waxay u dhigmaysaa:
“Zaaranaa Sadiiqunaa Min Marru-Reyxaan”
Waa in taariikhdaas aad loo xuso oo lagu dhex baahiyo inta ay khuseyso.